Kuongorora kwekambani / Mbiri - King Shumba Limited
Shenzhen King Lion Limited, yakavakwa mugore 2006, Mugadziri, iri muMaoYuan Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen guta. Isu tine yedu yega dhizaini, yekuvandudza uye yekushambadzira, Fekitori yedu ine nzvimbo yekugadzira inopfuura 1500 mativi emamirita uye vanopfuura vashandi ve100 vanosanganisira imwe nyanzvi dhizaini timu uye vashandi vakanyatsodzidziswa. Parizvino, pane sampuro yekugadzira musangano, musangano-wekucheka musangano, tafura seti, yemhuri nehotera yekushongedza zvishongedzo musangano. Isu takasarudzika mukugadzirwa kwemhando dzehombodo kurongedza bhokisi, tafura seti, zvishongedzo zvekumba, bhokisi rekuzora, uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama, senge kapu mapadhi, tafura padhi, mapikicha emifananidzo, varidzi vemagazini / mabhasikiti, mabhokisi ekuchengetera, mabhokisi enyama, murongi maseti, magirazi, tireyi, waini bhodhoro racks, zita kadhi mubati, menyu chivharo uye zvichingodaro! Zvese dhizaini uye saizi zviripo
Isu tinogamuchirawo ODM neOEM. Isu tinotarisa pane dhizaini, kuvandudza uye kutengesa kwezvinhu zvedu zvikuru zvigadzirwa.
Isu takanaka pakushandira uye kugona kugadzirisa matambudziko.
Zvigadzirwa zvedu zvinosangana nemitemo yeEU, zvinotengeswa zvakanaka uye zvakawana mabhenefiti muUSA, Europe, Middle East Asia nezvimwewo. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu uye utumire kubvunza kwako kwatiri neE-mail, Kubva pane nyanzvi sevhisi musimboti we "yakanakisa mhando, yakakwikwidza mutengo, kuendesa panguva uye basa rapashure-rekutengesa", Nekutenda kwe "kuvimba mumwe nemumwe, kugovana zvido nekubatsirana", tiri kugadzira ramangwana rakajeka pamwe chete needu epamba uye vatengi vekunze!
isu tinotarisira nemoyo wese vatengi vese kuti vauye kufekitori yedu kuti vaongorore, kutungamirwa pamwe nekushandira pamwe uye kuvaka hurefu-bhizinesi hukama newe. Zvese zvisikwa zvedu zvinogona kuenzanisirwa nesu ine yakashongedzwa uye yakanatsiridzwa kudhinda stamping pamutengo unonyanya kubatsira .Kunyangwe chiri chipo chezviitiko zvakakosha kana zvinhu zvekushambadza chako chiratidzo, zvinhu zvedu zvinokwanisa kuzadzisa zvaunoda.